ဘာသာစကားလေ့လာခြင်း ယုံတမ်းစကားတစ်ခု - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on October 29, 2012 at 17:51 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယုံတမ်းစကား(Myth) ဆိုတာ သိပ္ပံနည်းကျဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိစေကာမူမှန်တယ်လို့လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းက ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ အယူအဆတွေဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ၄င်း myth တွေဟာ လူတစ်ဦးမှတစ်ဦးစကားလက်ဆင့်ကမ်းပြီး လွယ်လွယ်ကူကူလက်ခံကြရင်း လူ့ဘ၀နေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာဝင်ရောက်နေ ရာယူကြီးစိုးထားပါတယ်။
ဘာသာစကားလေ့လာခြင်းမှာလည်းဒီလိုယုံတမ်းစကားတွေရှိပါတယ်။ antimoon website မှာဖော်ပြထားတဲ့ Language learning Myths and Facts တွေထဲကယူဆဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို တဆင့်ပြန်လည်တင်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အထူးသတိပြုဖို့ကတော့ သူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်ဟာ ကျိန်းသေပေါက် မှန်ရမယ်လို့ ယုံကြည်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါကို စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်က ကိုယ်လက်ခံယုံကြည်ထားခဲ့တာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်အမြင်တွေကိုသိရတဲ့အခါကျိုးကြောင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ဆနိုင်ဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့လူတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီး myth ကနေ fact အဖြစ်ပြောင်းယူလို့ရနိုင်စရာ သင်ခန်းစာယူစရာတွေ သတိပြုမိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
“The best way to learnaforeign language is to go toaforeign country”
“ဘာသာစကားတစ်ခုကိုလေ့လာဖို့အကောင်းဆုံးကတော့ အဲဒီဘာသာစကားပြောတဲ့နိုင်ငံကို သွားနေဖို့” ပါပဲတဲ့။
သာမန်အားဖြင့် အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန် စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာနေရင် အင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျင်မယ်လို့ လူတိုင်းကယူဆကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းဥရောပကမိဘတွေဟာ ငွေကြေးအကုန်အကျခံပြီး သားသမီးတွေကို ပြန်လာရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျင်လာမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွေကိုစေလွှတ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချလာတဲ့လူကြီးအများစုဟာ အနှစ် ၂၀ လောက်အနေကြာလာ တာတောင် အင်္ဂလိပ်စကားမကျွမ်းကျင်ကြပါဘူးတဲ့။ သူတို့ဟာ Did he make tea? လို့မေးရမှာကို He make tea?” ၊ I will help you” လို့ပြောရမှာကို I help you စတဲ့ အခြေခံအမှားလေးတွေကို တောင် ဆက်ပြီးမှားနေကြတုန်းပါပဲ။ စကားပြောတာနဲ့ အာရှသားတွေလား၊ လက်တင်တွေလား ရုရှားလား စသည်ဖြင့်တန်းသိနိုင်အောင်ကွဲပြားကြပါတယ်။ သူတို့တွေ လေယူလေသိမ်းနဲ့သံထွက်၊ သဒ္ဒါတွေမှာဘာကြောင့် ကျိုးစားပမ်းစားအားမထုတ်ကြတာလဲဆိုတော့ သူတို့အတွက် သိပ်မလိုအပ် လို့ပဲပေါ့။ သူတို့အမှားမှားအယွင်းယွင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားကို ကျန်တဲ့လူတွေက နားလည်ကြလို့ပါပဲ (တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း မနည်းနားထောင်ရင်းနဲ့ပေါ့)။ နောက်ပြီး သူတို့ရဲ့အမှားတွေကို ပြင်ပေးဖို့ ရာ အားနာတတ်ကြတာများပါတယ်။
ဒီအမေရိကမှာတွေ့ရတဲ့နမူနာက အံ့သြစရာဘာသာစကားအမှန်တရားတစ်ခုကိုလှစ်ဟပြနေပါတယ်။ ဒါကတော့ နိုင်ငံခြားမှာနေရုံနဲ့ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားကို အလိုအလျှောက် ကျွမ်းကျင်လာမှာမဟုတ် ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို သဒ္ဒါအထားအသိုမှန်မှန်၊ အသံထွက်ကောင်းကောင်း၊ ဝေါဟာရကြွယ်ကြွယ်ဖြစ် အောင်လေ့လာဖို့ ဒါကတွန်းအားမပေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒါတွေမရှိလည်း သာမန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုလုပ်နေနိုင်လို့ပါပဲ။ Give me apple လို့ article တွေမပါဘဲနဲ့ပြောတာမျိုး၊ Watch is no good လို့ပြောတာမျိုးနဲ့လည်း ဈေးဝယ်လို့ရနေနိုင်ပါသေးတယ်။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာနေထိုင်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုတွန်းအားအပေးဆုံးကတော့ အလုပ်ဖြစ်ရုံ (survival language) ဘာသာစကား တတ်မြောက်ဖို့လောက်ပဲအာရုံစိုက်စေတယ်။ နေ့စဉ်ပြောဆိုရမယ့် ထမင်းစားရေသောက်ပြောတတ်ရုံ၊ ပီဇာမှာတတ်ရုံ၊ အလုပ်ထဲမှာ အလုပ်သမား အချင်းချင်းပြောဆိုတတ်ရုံလောက်ပဲသေရေးရှင်ရေး အရေးတကြီးလိုအပ်တော့ ကျန်တဲ့ အပိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ လေ့လာသင်ယူလိုစိတ်နဲ့ သင်ယူနိုင်စွမ်း စတာတွေပေါ်မှာပဲ မူတည်နေတော့တယ်။ တနည်းအားဖြင့် သင်ကိုယ်တိုင်က စိတ်မ၀င်စားဘူးဆိုရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာနေပြီး အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့သူထက် ဘာမှပိုမကောင်းနိုင်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာနေတာဟာ မကြာခဏဆိုသလို ၀ါကျအမှားတွေပြောဖို့ တွန်းအားတောင်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ါမှားနေပေမယ့် အမှားအတိုင်း မဖြစ်မနေပြောဖို့လိုအပ်နေလို့ပါ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာလို စကားပြောခဏနားထားပြီး ကိုယ့်အတွက် သဒ္ဒါနဲ့ဝေါဟာရကြွယ်ဝစေမယ့် အရေးအသား လေ့လာလိုက်ဦးမယ်လို့လုပ်လို့မရပါဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀က စကားပြောဆိုဆက်သွယ်မှကိုအလုပ်ဖြစ်မှာမလို့ပါပဲ။ အမှားတွေလုပ်ရင်းကပဲ အမှားသံသရာလည်ကာ “He make tea?” လိုဝါကျတွေဟာ အကျင့်ပါသွားတဲ့အခါ အမှန်ပြန်ပြင်ဖို့ခက်လွန်းလှတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ native speakers တွေဟာ ကိုယ့်အမှားတွေကို ပြင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ သိပ်မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ သူတို့က အားနာနာနဲ့ ကိုယ့်သဒ္ဒါဘယ်လောက်ပဲဆိုးဆိုး ကျိုးစားနားလည်ပေးမှာများပါတယ်။
ဒါကြောင့်မလို့ နိုင်ငံခြားသွားနေခြင်းဟာ ၄င်းနိုင်ငံဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ဖို့သေချာပေါက် နည်းလမ်းဟု ထင်စရာရှိပေမယ့် လုံလောက်တဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုမရှိရင်တော့ အမှားမှား အယွင်းယွင်းနဲ့ သူနားလည်ကိုယ်နားလည်စကားလောက်နဲ့သာ အဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ကိုယ်ကသာကျိုးစားမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ နိုင်ငံခြား ဇာတ်လမ်းတွဲ၊ တီဗွီ၊ အင်တာနက်တို့ကနေ ဘာသာစကားပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း တစ်ခုဖန်တီးယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကမှပိုအန္တရယ်ကင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို အတင်းအကျပ် ၀ါကျအမှားတွေပြောရဖို့ဖိအားမရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ နှစ်သက်တဲ့နှုန်းနဲ့ အသံထွက်၊ အရေးအသား၊ စတာတွေမှာအာရုံစိုက်လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာနေရမယ်ဆိုရင်တော့ အားသာချက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ native speakers တွေနဲ့စကားပြောနိုင်မယ်။ ကိုယ်ကသာလေ့လာလိုစိတ်ရှိမယ်ဆိုရင် အရာရာကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားမှာလာတဲ့အသံထွက် လေယူလေသိမ်းဟာ အပြင်က ဈေးထဲမှာပြောဆိုကြတဲ့လေယူလေသိမ်းနဲ့ကွဲပြားတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၊ အစားအသောက်၊ တွေးခေါ်ပံ၊ုဒေသအသံထွက်တွေကအစ ဘာသာစကားကိုပုံဖော်နေလို့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်သာနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာနေခွင့်ရလို့ အဲဒီဘာသာစကားကိုလေ့လာရပြီဆိုရင် အထက်က အချက်တွေကို သတိထားပြီး ကိုယ့်ဘာသာစကားလေ့လာရေးမှာ အတားအဆီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ကျဉ်သွားနိုင်ရင်တော့ သားရွှေအိုးထမ်းတဲ့ကိန်းလုိ့သာဆိုချင်ပါတော့တယ်။
Permalink Reply by annie on October 31, 2012 at 10:19
Permalink Reply by Wai Phyo on October 31, 2012 at 10:34
Permalink Reply by Zaw Win on October 31, 2012 at 11:11
It depends on the learner's desire.
Permalink Reply by zawzaw on October 31, 2012 at 11:51
Permalink Reply by thomas minnvo on October 31, 2012 at 14:03
thanks for chicken soap
Permalink Reply by ZAR NI NYI NYI KYAW on October 31, 2012 at 15:17
I had an experience like this. One of my friends have been working in Singapore for over5years. He visited us onceayear near Christmas. I though he could be good at English. In reality, he couldn't speak fluently , and also made some big grammar mistakes.
Permalink Reply by Nant Thin Thin Hmwe on October 31, 2012 at 19:05
ကျွန်မလည်း တခါတလေ ငါးပိသံနဲ့ ပြောနေမိတုန်း။ :)
Permalink Reply by nyonyo on November 1, 2012 at 11:42
Permalink Reply by maythuaye on November 1, 2012 at 12:37
Thanks you for your suggestions.
Permalink Reply by oneonekaw on November 1, 2012 at 13:53
Permalink Reply by khinthidasoe on November 1, 2012 at 20:24
ဒီလို Post လေးတွေ သိခွင့်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။
Permalink Reply by htinzaw on November 1, 2012 at 22:27